अन्तर्राष्ट्रिय बैंक स्थानान्तरण SWIFT द्वारा हाम्रो वेबसाइटमा कसरी भुक्तान गर्ने?
HGH थाईल्याण्ड द्वारा अक्टोबर 08, 2017
तीव्र भुक्तानी के हो? सुविधा, गति र प्रयोगको सुरक्षा
SWIFT भुक्तानी बैंकहरू व्यक्तिगत र कानूनी संस्थाहरू बीच SWIFT अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तान नेटवर्कको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय पैसा स्थानान्तरण हो।
यस समयमा नेटवर्कको सदस्य 10 देशहरूमा 210 हजार वित्तीय निगमहरू भन्दा बढी छन्। यसले तपाइँलाई प्रायः धेरै विकसित देशहरुमा विभिन्न मुद्राहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी पठाउन क्षमता दिन्छ।
कसरी SWIFT प्रणाली मार्फत पैसा हस्तान्तरण गर्ने?
धेरै बैंकहरूले घर छोडेर तपाईंको बैंक खाताबाट अन्तर्राष्ट्रिय SWIFT हस्तान्तरण अनलाइन पठाउने क्षमता प्रदान गर्दछ।
अर्को देशमा पैसा पठाउन, अन्तर्राष्ट्रिय स्थानान्तरणको वर्गमा तपाईंको बैंक खाता ("इन्टरनेट बैंकिंग", "अनलाइन क्लाइन्ट") लग इन गर्नुहोस्, त्यसपछि प्राप्तकर्ताको बारेमा आवश्यक जानकारी भर्नुहोला, तपाई सजिलै संग पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ। प्राप्तकर्ताको खर्च।
उपस्थिति प्रश्नहरूको सन्दर्भमा, तपाईं आफ्नो बैंकलाई फोन गर्न र विस्तृत विस्तृत सल्लाह प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
बैंकबाट सिधा पैसा कसरी पठाउनुहुन्छ?
तपाईंको देशमा कुनै पनि बैंक SWIFT हस्तान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। बैंकमा एक व्यक्तिगत भ्रमण र तपाईंको लेनदेन गर्न को लागी भन्नु र बैंक प्राप्तकर्तालाई सिधै प्राप्तकर्ताको बारेमा बैंक जानकारी प्रदान गर्नुहोस्। बैंक कर्मचारीहरूले तपाईंको लागि सबै बनाउनु र पूर्ण गर्नेछ, लेनदेन प्रक्रियाले 15 मिनेट भन्दा बढी लिने छैन।
लेनदेनको लागि आवश्यक भुक्तानीको डेटा के हो?
विदेशमा पैसा हस्तान्तरण गर्न ग्राहकलाई पूर्ण SWIFT विवरण भौतिक वा कानूनी व्यक्तिको विवरण आवश्यक छ, जुन स्थानान्तरण पठाइनेछ।
- लाभार्थी बैंकको नाम (उदाहरण बङ्कक बैंक सार्वजनिक CO.LTD)
- SWIFT प्रणालीमा कोड (उदाहरण BKKBTHBK )
प्राप्तकर्ताको खाता नम्बर
- नाम र प्राप्तकर्ताको उपनाम
SWIFT निम्न अवस्थामा रहेका स्थानान्तरण पठाउन उपयुक्त छ:
- आयोग शुल्क को कम से कम विदेश मा ठूलो रकम को संचालन।
- विदेशमा अनलाइन स्टोर खरिद गर्दछ।
- विदेशी कम्पनीहरूको सेवाहरूको भुक्तानी।
- अन्य उद्देश्यका लागि व्यक्तिहरूको ठूलो पैसाको स्थानान्तरण।
यद्यपि, यो ध्यान दिइनेछ कि SWIFT प्रणालीमा प्रदर्शन गरिएका सबै कार्यहरू पूर्ण सुरक्षित छन्।
सबै सहित, वित्तीय, यसको लागि जिम्मेवारी सहित, प्रणाली आफैद्वारा लिइन्छ। तार्किक र शारीरिक घटनाहरूको संयोजनले ट्रान्जिटमा कुनै पनि परिवर्तनलाई अनुमति दिदैन, यसबाहेक, विशेष इन्क्रिप्सनले SWIFT मार्फत प्रसारणको क्रममा सन्देश परिमार्जन गर्न असम्भव बनाउँछ।
ग्राहक र प्राप्तकर्ता बाहेक, कोही पनि यसको सामग्रीहरू पढ्न सक्दैनन्।
विदेशमा SWIFT हस्तान्तरण पठाउने गति?
सामान्यतया पैसा 24 घण्टा (कार्य दिन) भित्र प्राप्तकर्तामा पुग्छ। प्रक्रियाको अधिकतम अवधिले प्राप्तकर्ता खातामा 3-5 दिन लिन सक्छ।
हाम्रो वेबसाइटमा तपाईंको अर्डरको लागि द्रुत भुक्तानीको बारे थप जानकारी प्राप्त गर्न, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस